Hello Nepal News » चार वर्षपछि आज फ्रान्स र पोर्चुगलको ‘महाभिडन्त’ हुँदै : कसले मार्ला बाजी ?
चार वर्षपछि आज फ्रान्स र पोर्चुगलको ‘महाभिडन्त’ हुँदै : कसले मार्ला बाजी ?
युइएफए नेसन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा आज युरोपका दुई ‘पावरहाउस’ टोेलीहरू फ्रान्स र पोर्चुगलबीच महाभिडन्त हुँदैछ । डिफेन्डिङ युरो च्याम्पियन र डिफेन्डिङ वर्ल्ड कप च्याम्पियन टोली आज राति आमनेसामने हुन लागेका हुन् । यो खेल धेरैका लागि व्यग्र प्रतीक्षाको खेल बनेको छ ।
यो खेलका लागि सन् २०१८ को विश्वकप च्याम्पियन फ्रान्सले २०१६ को युरो च्याम्पियन पोर्चुगललाई आफ्नो घरेलु मैदानमा स्वागत गर्दैछ । खेल नेपाली समयअनुसार आज राति ठीक १२ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ । खेल फ्रान्सको राष्ट्रिय रंगशाला स्टेड डे फ्रान्स रंगशालामा हुनेछ ।
नेसन्स लिगमा लिग ‘ए’ को समूह ‘३’ मा मा रहेका यी दुई टोली अहिले समान ६–६ अंक जोडेर पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । पोर्चुगल र फ्रान्स दुवैले यसअघिका दुई–दुई खेल शतप्रतिशत जितेका छन् । तर, गोलअन्तरमा अघि रहेर पोर्चुगल समूहको शीर्ष स्थानमा छ । यस समूहका अन्य टिमहरू स्वीडेन र क्रोएसिया हालसम्म जितविही छन् । उनीहरूले यसअघिका दुवै खेल हारेका छन् ।
फ्रान्स र पोर्चुगलको भिडन्त निकै घम्साघम्सी हुने पक्का छ । यी दुई टोली अन्तिमपटक सन् २०१६ को युरो कपको फाइनलमा भिडेका थिए । त्यसबेला पोर्चुगलले फ्रान्सलाई उसकै घरमा ०–१ ले हराएर उपाधि जितेको थियो ।
आज फ्रान्स र पोर्चुगल ४ वर्षपछि त्यही मैदानमा भिड्न लागेका हुन्, जहाँ ४ वर्षअघि युरो कपको फाइनलमा भिडेका थिए । फ्रान्स आज २०१६ मा युरो कपको फाइनलमा पराजय भोगेको टिमसँग आफ्नै भूमिमा खेल्दा चर्को दबाबमा हुनेछ । आजको खेल फ्रान्स र पोर्चुगल दुवैका लागि प्रतिष्ठाको खेल पनि हुनेछ ।
फ्रान्स आज क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिम पोर्चुगलविरुद्ध उत्रिँदा केवल जितको खोजीमा मात्रै हुनेछैन, ४ वर्षअघि उपाधि भिडन्तमा आफ्नै भूमिमा भोगेको हारको बदला पनि लिन चाहन्छ । त्यसबेला पोर्चुगलका कप्तान रोनाल्डो खेलको १७औं मिनेटमै घाइते भएर मैदान छाडेका थिए । तर, आज रोनाल्डो सोही टोलीविरुद्ध सोही मैदानमा ठीकठाक उत्रिनेछन् ।
आजको खेल केवल फ्रान्स र पोर्चुगलबीचको भिडन्त मात्रै हुनेछैन, यो खेललाई पोर्चुगलका रोनाल्डो र फ्रान्सका केलियन एमबाप्पे तथा एन्टोनी ग्रीजम्यानबीचको भिडन्तका रूपमा पनि हेरिएको छ । तसर्थ पनि यस खेललाई हेभिवेट टिम र हेभिवेट खेलाडीबीचको भिडन्त मानिएको छ ।
प्रकाशित मिति २५ आश्विन २०७७, आईतवार ०४:२३